Global Voices teny Malagasy » Koety: Tapitra Ve Ny Fahavaratra? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2018 16:42 GMT 1	 · Mpanoratra Abdullatif AlOmar Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Koety, Fahasalamàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sakafo, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2007)
Toa tapitra ny fahavaratra any Koety raha toa ka mivoaka amin'ny hakamoany ny tontolon'ny blaogy ao amin'ny firenena. Amin'ity herinandro ity, resahan'ireo biloagerantsika ny mikasika ny fanakanana iray hafa ao amin'ny firenena, ny fividianana DVD tsy ara-dalàna, gazetiboky vaovao ho an'ireo Filipiana any Koety ary andro iray nahafinaritra tany amin'ny… toerana iray famokarana sarimihetsika.
Miresaka mikasika ny fanakanana iray hafa ao Koety i Intlxpatr  – ary amin'ity indray mitoraka ity ny melamine  no lasibatra.
”Androany, tao amin'ny pejy voalohany tamin'ny Kuwait Times no nisy ny fanambarana iray avy amin'ny Minisiteran'ny Varotra milaza ny fanakanana ny famarotana entana rehetra misy melamine, milaza fa ”mifototra amin'ny vaovao azo avy amin'ny Departemantan'ny Fadin-tseranana sy ny biraon'ny Sekretera Jeneralin'ny Filankevitry ny Fiaraha-miombon'antoka ao amin'ny Golfa izany ary misy idirany amin'ny fisiana urea formaldehyde ao anatin'ny melamina, izay voaràra satria ”inoana fa manimba ny fahasalamana izany”, hoy izy manoratra.
Nahita gazetiboky iray vaovao mikendry ny Filipiana ao Koety i Ana Filibini , Filipiana iray mipetraka ao Koety. Manazava ny zavatra niainany in-dray Zoma izay tao an-drenivohitra ihany koa izy.
”Tsy hevitra mahira-tsaina indrindra manerana ny tany ny mandeha any Kuwait City amin'ny andro Zoma. Ankoatra ny fifamoivoizana mitohana, ny tsy fahampian'ny toerana fijanonan'ny fiara ary ny fitangoronan'olona an-jatony izay mivezivezy tsy hay ho aiza akory, dia andro iray koa io ivezivezen'ireo olona hafahafa eny an-toerana. Eny, tena marina izany, ampidirin-dry zareo anaty resaka ianao na dia tsy miraharaha azy ireo aza,” hoy izy, manazava.
Resahan’ i Bashar avy ao amin'ny BlogAllAlong  ny mikasika ny zavatra mampihomehy hitany tany amin'ny trano fivarotana lehibe – DVD tsy ara-dalàna !.
”Izany hoe niantsena niaraka tamin'ny fianakaviana aho, tao amin'ny Carrefour teny amin'ny Avenues, ary nahita ilay sarimihetsika 300. Novidiako ilay dika tena izy, toy ny Amerikana tsara… aahh, Koetiana mantsy eh. Nitondra izany tany an-trano, nanokatra izany rehefa tsy nisy olon-kafa tao an-trano, nientanentana ery handefa azy tamin'ny fitaovana ‘home theatre’ tao an-trano ary ny hahita ny mba endrik'izany taorian'ny fanamarihana goavana mikasika ny hatsaran'ny sary sy ny fandehan'ilay sarimihetsika,” hoy izy, manoratra.
Hitany fa amidy any Inde, Sri Lanka ary Bangladesh irery ihany ilay DVD. Vakio ny ambin'ilay lahatsoratra mba hahafantaranao ny antony nanapahany hevitra tsy hividy DVD ao Koety intsony.
Nahita zavatra vaovao hatao any Koety i yo_ghurt ao amin'ny stillkuwaiting  – ary ahitana fadraketana an-tsary maro be izany!
” Nahita zavatra hafa atao ao Koety aho tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, izay tsy dia ambara be loatra. Taorian'ny fikarohana sasany nataoko, hitako ny The Shooting Range Complex eo akaikin'ny Klioba Hunting & Equestrian (fa tsy ao anatiny)”, hoy izy, manamarika.
Manasongadina tsy fahampiana iray hafa ao anatin'ny gazety ao Koety indray i Forzaq8  ary manazava ny antony tsy inoany azy ireny intsony.
”Tsy vao voalohany anoratako mikasika ny gazety ao Koety izao, mino aho fa ratsy avokoa izy ireo. Mampalahelo fa isanandro aho mahita porofo bebe kokoa amin'izany foana,”, hoy izy, manazava.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/16/127883/
 Ana Filibini: http://anafilibini.blogspot.com/2007/08/filipino-magazine-in-kuwait.html